मेरो छोराले जन्मदर्ता किन नपाउने ? |
मेरो छोराले जन्मदर्ता किन नपाउने ?
प्रकाशित मिति :2017-08-07 14:04:40
काठमाडौं । गोरखा सुलीकोट गाउँपालिका, ५ की पबिता दर्जीले नागरिकता पाउन लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उनले २०७३।१०।२९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाबाट बुबा सेते दर्जीको नामबाट बंशजको आधारमा नागरिकता पाएकी हुन् ।
त्यो दिन ८ बर्षसम्म नागरिकता पाउनका लागि उनले गरेको संघर्ष पुरा भयो । तर फेरि अहिले छोराको जन्मदर्ताका लागि उनी उस्तै संघर्षमा छिन् । विवाहित महिलाले श्रीमानको नामबाट नागरिकता लिनुपर्छ भन्दै उनलाई नागरिकता दिनबाट बन्चित गरीएको थियो । अहिले त्यही बुबा नभएको भन्दै छोराको जन्मदर्ता रोकिएको हो ।
‘मैले आफ्नो नागरिकता बनाएपछि छोराको जन्म दर्ता गराउन सुलीकोट गाउँपालिका– ५ ताकुमालाकुमारी (साविक ताकुमालाकुमारी गाविस) मा गएकी थिए । गाविस सचिवले वडा अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस चाहिन्छ भन्दै जन्मदर्ता गराइदिनुभएन’ पबिताले भनिन् ।
अशोकसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको उनको छोरा हाल आठ वर्षको भइसकेका छन् ।
छोरा अहिले जलकन्या माध्यमिक विद्यालय तामलावोट कक्षा ३ कक्षामा पढिरहेका छन् । स्कुलले छोराको जन्मदर्ता मागिरहेको उनले बताईन् । ‘मेरा आमाबुबा नेपाली, म नेपाली तर मेरो छोराको जन्मदर्ता किन नबन्ने’ पबिताले भनिन् ।
वडा नम्बर ५ की वडा सचिव (पहिला गाविस सचिव) निशा राईले पबिताको नागरिकतामा श्रीमानको नाम उल्लेख नभएकाले जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा दिन नसकेको बताउनुभयो । ‘पबिताको नागरिकतामा श्रीमानको नाम नै छैन, जन्म दर्ता दिदा आमा वा बुबा भएनी हुन्छ । जन्मदर्ता गराउन बुबा र आमा दुबैको नागरिकता चाहन्छि ।’ सचिव राईले भन्नुभयो ।
सचिवले जन्म दर्ता फारमले मागे अनुसारको प्रमाण नभएकोले दिन नमिल्ले बताउनुभयो । ‘जन्मदर्ता फारममा शिशु जन्मेको ठेगाना, आमाबुबाको विवरण, बाजेबजैको विवरण जस्ता कुराहरु मागेको हुन्छ । जसले गर्दा फारम अनुसार जन्मदर्ता दिन नसकेको हो’ सचिव राई भन्नुभयो ।
पबिताको छोरालाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र दिन नसकेपनि नाम र जन्म मिति उल्लेख गरेको सिफारिस भने दिन मिल्ले सचिवले बताउनुभयो ।
पञ्जीकरण विभागका अनुसार जन्मदर्ता गराउन निम्न व्यवस्था गरेको छ ।
– शिशुको जन्मदर्ता गर्नका लागि बुवा–आमा, बाजे वा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्ति
– धर्मपुत्र पुत्रीको जन्म दर्ता गर्न कानून बमोजिम पारित लिखत समेत राखी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु वा आमाले,
– बाबु आमा र वंशजतर्फ कोही पनि नभएकाको हकमा सम्बन्धीत वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा सम्बन्धीत गाविसको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा गाविस सचिव र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको हकमा -सम्बन्धीत वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा सम्बन्धीत नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धीत वडा सचिवको सिफारिशको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था नभएको नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत ।